Kule nkambo, uzofunda ukuhlela, ukulungisa, nokuphatha izici eziphambili ku-SharePoint 2016, kufaka phakathi nokusebenzisa ukutholakala okuphezulu, ukutakula izinhlekelele, ukwakheka kwesicelo sesevisi, amasevisi wokuxhumana we-Microsoft, ukukhiqiza, kanye namapulatifomu nezici zokubambisana. Uzofunda izici ezintsha ze-hybrid ze-SharePoint 2016 kanye nezixazululo ze-business intelligence, ukuphathwa kokuqukethwe kwamabhizinisi, ingqalasizinda yokuphathwa kokuqukethwe kwewebhu, izixazululo, izinhlelo zokusebenza kanye nendlela yokuthuthukisa nokusebenzisa uhlelo lokubusa nokwenza ngcono noma ukuthuthela ku-SharePoint 2016.
Le nkambo isebenzisa i-Microsoft SharePoint 2016 futhi ifaka imininingwane evela kuMkhiqizo oMthethweni we-Microsoft Learning 20339-2: I-Advanced Technologies ye-SharePoint 2016.
Izici ezintsha nezithuthukisiwe zobungqingili be-SharePoint 2016
Izici ze-hybrid eziyinhloko ku-SharePoint 2016
Hlela futhi uhlele imvelo ye-SharePoint 2016 ukuthola ukutholakala okuphezulu nokutholakala kwezinhlekelele
Hlela futhi usebenzise izinsizakalo zokuxhumana zebhizinisi kanye nensizakalo yesitolo ephephile
Lungiselela futhi uphathe amasevisi wokukhiqiza kokuthunyelwa kwe-SharePoint 2016
Lawula izixazululo ekuthunyelwe kwe-SharePoint 2016
Hlela futhi ulungise izici ze-social computing
Hlela futhi ulungise ukuphathwa kokuqukethwe kwewebhu ukuze uthole indawo eqondene ne-Intanethi
Hlela futhi ulungise ibhizinisi ukuphathwa kokuqukethwe kokuthunyelwa kwe-SharePoint 2016
Hlela futhi ulungise izixazululo ze-business intelligence, ukuphathwa komsebenzi, ukukhiqiza, kanye namapulatifomu nezici zokubambisana
Yenza Ukuthuthukiswa noma Ukuthuthela ku-SharePoint 2016
Okuhlangenwe nakho kochwepheshe be-IT abanesithakazelo sokufunda indlela yokufaka, ukulungisa, ukuhambisa nokuphatha ukufakwa kwe-SharePoint 2016 ku-centre yedatha noma efwini.
Ulwazi olungaphezu kweminyaka emine ngokuhlela nokugcina i-SharePoint nezinye ubuchwepheshe obuyinhloko lapho i-SharePoint incike khona, kufaka phakathi iWindows Server 2012 R2 noma kamuva, i-Internet Information Services (IIS), i-Microsoft SQL Server 2014 noma kamuva, i-Active Directory Services (AD DS), kanye nezinsiza zengqalasizinda zenethiwekhi.
Okuhlangenwe nakho okungenani konyaka owodwa ngokuthumela nokuphatha amafomu amaningi we-SharePoint 2013 kuwo wonke amabhizinisi amakhulu nokumaketha kwamabhizinisi kuzo zombili izinkomba zobuchwepheshe nezengqondo
Ulwazi olusebenzayo lokuklama kwenethiwekhi, kufaka phakathi ukuphepha kwenethiwekhi
Ukuphathwa kwe-Software kwiseva yebhizinisi le-Windows Server 2012 R2 noma i-Windows Server 2016 imvelo
Ukuthumela nokuphatha izinhlelo zokusebenza natively, cishe, futhi efwini
Ilungiselela i-AD DS ukusetshenziswa ekuqinisekiseni nasekugunyazweni, futhi njengesitolo somsebenzisi
Ukuphatha uhlelo lokusebenza ngokude ngokusebenzisa iWindows PowerShell 2.0 noma kamuva
Ukuphatha yolwazi kanye nezindima zeseva ku-SQL Server
Ixhuma izinhlelo zokusebenza ku-SQL Server
Ukusebenzisa ukuphepha okusekelwe ezimangalisweni
I-1. Isingeniso ku-SharePoint 2016
Izingxenye eziyinhloko zohlelo lwe-SharePoint 2016
Izinto ezintsha, ezikhishwe, nezikhishiwe ku-SharePoint 2016
I-SharePoint 2016 ne-SharePoint Online editions
I-2. I-Hybrid Scenarios ye-SharePoint 2016
Hlola izici ze-hybrid ku-SharePoint 2016
Lungiselela ukuthunyelwa kwe-SharePoint 2016 ye-hybrid
I-3. Yakha Amasu Wokuphatha Okuqhubekayo Kwebhizinisi
I-design ye-database ye-Design yokuthola ukutholakala kwezinhlekelele eziphezulu
Yakha ingqalasizinda ye-SharePoint yokutholakala okuphezulu
Hlela ukutakula inhlekelele
I-4. Hlela futhi Usebenze Izinsizakalo Zokuxhumana Ibhizinisi (BCS) kanye Nesevisi Yezokuphepha Evikelekile
Hlela futhi ulungise i-BCS
Lungiselela isevisi yesitolo ephephile
Lawula amamodeli we-BCS
I-5. Lungiselela Izinsizakalo Zokukhiqiza Ukuthunyelwa kwe-SharePoint 2016
Qonda isakhiwo se-SharePoint-in
Ukuhlinzeka nokuphatha izinhlelo zokusebenza nezinkampani zohlelo lokusebenza
Ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zokukhiqiza
I-6. Lawula Izixazululo ku-Microsoft SharePoint 2016
Qonda isakhiwo sesisombululo se-SharePoint 2016
Lawula izixazululo ze-sandboxed
I-7. Ukuxhuma Abantu
Amaphrofayela amaningi womsebenzisi
Nika amandla ukuxhumana komphakathi
I-8. Hlela futhi ulungise ukuphathwa kwe-Web Content
Hlela futhi usebenzise ingqalasizinda yokuphathwa kokuqukethwe kwewebhu
Lungiselela ukuzulazula okuphethwe kanye nezindawo zezinhlu
Sekela izilimi eziningi nezindawo eziningi
Nika amandla ukuklama nokwenza ngokwezifiso
Ukusekela abasebenzisi beselula
I-9. Hlela futhi ulungise ukuphathwa kokuqukethwe kwe-Enterprise
Hlela ukuphathwa kokuqukethwe kwebhizinisi
Hlela futhi ulungiselele i-EDiscovery
Hlela ukuphathwa kwamarekhodi
I-10. Hlela futhi ulungise izixazululo ze-Business Intelligence
Hlela izakhiwo ze-BI
Hlela, phonsa, lawula amasevisi we-BI
Hlela futhi ulungise amathuluzi wokuhlaziywa okuthuthukisiwe
I-11. Hlela futhi ulungiselele ukukhiqizwa nokusebenzisana
Hlela futhi ulungise izici zokubambisana
Hlela futhi ulungise izingxenye
I-12. Thuthukisa futhi Hambisa ku-SharePoint 2016
Lungiselela ukuthuthukisa noma ukufuduka
Hlela futhi uphathe ukuthuthukiswa kwe-site